Bangu-33 abazovela enkantolo ngawokumba izimayini ngokungemthetho | News24
Bangu-33 abazovela enkantolo ngawokumba izimayini ngokungemthetho
Polokwane - Kulindeleke ukuthi abantu abangu-33 ababhekene necala lokumba izimayini ngokungemthetho bavele eNkantolo kaMantshi yaseGiyani ngoMsombuluko.
La bantu baboshwa ngoLwesihlanu ngemuva kwezikhalazo ezavezwa wumphakathi ngabasolwa abamba imayini yegolide i-Ellerton, eNhlaniki.
Okhulumela oKlebe uCaptain Matimba Maluleke ukhiphe isitatimende esithi lolu phenyo lwenziwe yithimba elihlanganisa uphiko lwe-Serious Organised Crime Investigation Unit, wuMnyango weziMbiwa, amaphoyisa aqapha ukuthula emphakathini, ithimba lesifundazwe eliphenya amacala ahleliwe kanye neCriminal Records Centre.
OLUNYE UDABA:Izakhamuzi zithi abavaleleke emayini bagcinwe yinyoka
"Leli thimba ligasele emayini engasasebenzi lathola imikhiqizo yegolide, yizimoto ezinhlanu kanye nezinye izinsizakusebenza okubalwa kuzo ama-generators amabili, imishini yokumba emayini, amatende, yizando kanye nesisefo okubiza u-R500 000," kusho uMaluleke.
Laba basolwa babhekene necala lokuphula umthetho wokuthuthukiswa kwezimbiwa phansi, wubugebengu kanye nokutholakala nemikhiqizo yegolide.
OKlebe bathi uphenyo lusaqhubeka nakwezinye izifunda kulesi sifundazwe.